Chizulu (Chindebele: Sizulu; Isizulu) mutauro weSouthern Bantu webazi reNguni (kana dzinza revanhu vechiNguni) unotaurwa muSouth Afrika. Ndiwo mutauro weMazulu (kana Vazulu). Dunhu reVazulu rinonyanya kugara kuKwaZulu-Natal muSouth Afrika. Chizulu ndiwo mutauro wepamusha unotaurwa zvakanyanya muSouth Afrika (24% yevagari), uye unonzwisiswa nevanhu vanodarika makumi mashanu muzana (50% huwandu wevanhu). Chizulu chakava imwe yemitauro gumi nematanhatu yeSouth Afrika muna 1994. Chizulu mutauro wechipiri uchikundwa neChiswahili unotaurwa nevanhu vakawanda.
2 Kugoverwa kwemutauro
4 Mabhii eChizulu
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chizulu&oldid=89046"
Last edited on 23 Nyamavhuvhu 2021, at 09:52
This page was last edited on 23 Nyamavhuvhu 2021, at 09:52.